Irreecha Birraa kutaa addunyaa gara garaatti kabajame - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Bonita Yani
Irreecha Jenevaatti kabajame
Irreechi biyyoota addunyaa garaagaraatti, dilbata kaleessaas kabajamaa ooleera. Isaan keessaas, kan magaalaa lakku Minniyaapoolis, Atilaantaaa Jorjiyaa, Melboorne Awustraaliyaa fi kan magaalaa Naayiroobii, Keeniyaa keessatti argamu.
Birraan bar'eera. Oromoon biyyaa alaafi biyya keessa jirus horaafi lagatti ba'ee irreeffachuun waaqaaf galata galcheera.
Irreeffannaan guddichi kan Hora Arsadee Bishooftuutti gaggeeffamudha. Irreechi Hora Arsadee bara kanaas Onkoloolessa 1, 2018 haala ho'aa ta'een kabajameera.
Baatii Birraa lamaan kana keessatti--Fulbaanaafi Onkoloolessa keessa biyyaafi kutaa addunyaa bakka gara garaatti kabajamaa jira.
Torban Irreecha Hora Arsadeetti kabajametti, Irreecha Malkaa Ateetee Buraayyuutti, Irreecha Biyya Ameerikaa kutaa Miniyaapoolis magaalaa Lakkuutti, Awustraaliyaa magaalaa Melboornitti, akkasumas kan Keenyaa Naayiroobii ammoo Siitii Paark bakka jedhamutti kabajamee ooleera.
Hirmaattota Irreecha Keeniyaa magaalaa Naayiroobii, kan bara 2018
Irreecha biyyoota addunyaa gara garaa keessatti
Irreecha Hora Arsadee bara kanaas kan adda taasisan taateewwan hedduutu jiru. Isaan keessaas:
Sabaaafi sablammoonni obbolaan Oromoo hedduun irratti hirmaachuudha. Gareedhaan gurmaa'anii uffataafi waan eenyummaa isaanii calaqqisiisuun faayamanii sabaafi sablamoonni Kibbaa irratti argaman, saba Sidaamaa, saba Koonsoofi saba Alaabaa akka jiran gabaafnee turre.
Lakkoofsi namootaa irreecha Hora Arsadee bara kanaarratti argamees dabaluun olitti namoonni sababa gara garaan biyyaa baqatanii turan wagoota hedduun booda deebiyanii irratti argamanii galata galfataniiru.
Irreecha bara kanaa waanti adda taasisu kan biraan namoonni gaa'ela isaanii guyyaa galataa kana raawwatan baayyeen jiraachuudha.
Madda suuraa, Waa Ta'uuf
Hirmaattota Irreecha Hora Arsadee kan bara 2018 keessa
Namoota Irreecha Hora Arsadee kanarratti cidha isaanii raawwatan keessaa misirroonni nuti dubbifne maaliif akka guyyaa kana filatan yeroo dubbatan, guyyaa tokkummaafi jaalalaa waan ta'eef jedhu.
Itti karoorfatanii Jimmarraa akka dhufan kan dubbatan warri walfuudhan kun, carraa namoonni miliyoonaan lakkaa'aman amaamota isaaniif ta'ellee ni dubbatu.
Irreechi bakkawwan kabajame maratti galata galfachuun alatti ergaan tokkumma cimsachuu, jaalala qabaachuufi quba walqabaachuu akka ta'e hirmaattonni Irreecha kan Naayiroobii irratti hirmaatan ni dubbatu.
Irreechi waltajjii aadaafi eenyummaa ta'uurra darbees kan tokkummaafi jaalalaa ta'uu isaatiinis maqaa gaarii horachaa deemuun dagagaa jiraachuu hirmaattonni ragaa ba'u.
Kuusaa suuraa, Irreechi Arfaasaa Awustiraaliyaa, Melbarniitti kabajame
7 Caamsaa 2018
Taphataa gameessi Arjantiinaa Maraadoonaan ganna 60tti boqote